Zamalek oo hanatay horyaalka BAL
Horyaalka Basketball Africa League oo uu soo abaabulay horyaalka NBA-da Mareykanka, islamarkaana VOA ay iskaashi warbaahineed la leedahay, ayaa waxaa kaalinta koowaad ku loolamay 12 koox oo ka kala socday 12 dal oo African ah.
Cayaaryahan Mouloukou Souleyman Diabate ayaa dhibcihii ugu badnaa oo ahaa 14 u dhaliyey kooxda Zamalek, isaga oo sidoo kalena 6 goor caawiyey, halka cayaaryahan Mohab Yasser Abdallatif uu isna ku daray 14 dhibcood oo kale. Sidoo kale Michael Olayinka Fakuade ayaa 15 dhibcood ku biiriyey guusha kooxda reer Masar.
Kooxda laga adkaaday ee US Monastir ayaa waxaa dhibacaha ugu badan oo ahaa 14 iyana u dhaliyey Makrem Ben Romdhane.
Kooxda reer Masar ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee hanatay horyaalka Kubadda Kolayag Afrika ee Basketball Africa League (BAL) oo markii ugu horeysay la qabtay sanadkan.
Horyaalka African Basketball League (BAL), oo socday laba toddobaad ayaa 12 koox 16-kii May uga furmay magaalada Kigali, ee caasimadda Rwanda, sanad kadib markii horyaalkaas waqtigii la furi lahaa dib loogu dhigay COVID-19 dartiis.
Tartanka ayaa ku yimid iskaashi ay sameeyeen horyaalka Mareykanka ee NBA iyo xiriirka caalamiga ah ee kubadda koleyga ee IBF. Waxay aheyd tallaabadii ugu horreysay ee NBA uu horyaal kaga aas-aasayo meel ka baxsan Waqooyiga America.
Dhinaca kale, kooxda Clube Atletico Petroleos de Luanda ee dalka Angola ayaa 97-68 kaga adkaatay kooxda Patriots BBC ee dalka Rwanda, cayaartii loogu loolamayey kalainta saddexaad.